Coronavirus Mailo izao tontolo izao
Hatreto dia tsy mbola nahitàna trangan`aretina « Coronavirus » eto Madagasikara, araka ny vaovao ofisialy. Nohamafisina ny fepetra fitandremana eny anivon`ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo malagasy.
Ny “Aviation Civil de Madagascar” (ACM) dia nampitombo ny isan'ireo mpandraharaha miantoka ny fanaraha-maso miditra eto amintsika. Mihamafy hatrany ny fifandrandrasana satria nivoatra ny toe-java-misy eto amin'izao tontolo izao. Ireo fepetra ireo dia fomba fanao saingy mampametra-panontaniana ihany raha ho ampy izany raha jerena ny vaovao any ivelany amin'izao fotoana izao. Ireo haino aman-jery iraisam-pirenena, tato ho ato, dia nilaza betsaka momba izay mitranga any Italia. Ny fepetra hentitra noraisin'ny manampahefana italiana dia naneho hevitra betsaka ary niteraka ahiahy tamin'ny hevitry ny firenena frantsay, izay manahy ny maha akaiky ireo firenena roa tonta. Mitandrina mafy i Frantsa, ary nosokafana ireo hopitaly rehetra, saingy ny minisitry ny fahasalamana vaovao dia te hanome toky ary nanamafy fa tsy misy ahiahy amin`izao fotoana izao. Na izany aza, maro ireo manampahaizana manokana no milaza fa ny Covid-19 dia efa tafiditra ao Frantsa. Nasongadin'izy ireo fa tsy azo antoka ireo arofanina. Hatreto, tsy mbola mandripaka ity valanaretina ity saingy mitombo isa hatrany ireo olona mitondra ny tsimokaretina. Miisa 81 191 ireo ahitana soritr’aretina, 2 768 ireo namoy ny ainy, roa tao Frantsa. Tsy azo ihodivirana ny fifamezivezana eo amin`ny firenena iray saingy mitombo ny fanafoanana sidina. Tsy i Madagasikara no misedra izany fa misy fahatsapana hoe “tsy azo ihodivirana”. Manontany tena ny sasany raha tsy azo atao intsony ny fisorohana ny fihanaky ny valan'aretina. Mihetsika ny eo amin`ny sehatra iraisam-pirenena ary manao izay ho afany ireo mpitsabo sy mpikaroka mba hikarohana fanafody sy fanaovana vaksiny haingana araka izay azo atao.